Mpamatsy lamba famaohana amoron-dranomasina avy any Shina! Vao tsy ela akory izay, ny tora-pasika fasika dia mifamoivoy amin'ny lamba famaohana amoron-dranomasina ary tsy zakan'ny olona izany. Manomboka amin'ny tenifototra hash amin'ny haino aman-jery sosialy ka hatrany amin'ny bilaogy amin'ny tranokala lamaody, mihodina ireo lamba famaohana ireo ary raha ny marina dia tsy misy mitaraina. Ary izao ...
Ny lamba famaohana microfiber dia manova ny fomba fanadiovanao ny tranonao sy ny fiaranao. Ny kofehin-drakotra manify dia manolotra tombony maro na inona na inona fampiasanao ny servieta. Ireo lamba famaohana microfiber mihinana haingana sy maina ireo no hamita ny asa! Order ny lamba famaohana microfiber ambongadiny anio. Inona avy ireo lamba famaohana microfiber? Inona no ...
Ny lamba firakotra mavesatra dia fitsabahana azo antoka sy mandaitra amin'ny fitsaboana ny tsy fahitan-tory.
Izany dia hoy ny mpikaroka soedoà nahita fa ny marary tsy mahita torimaso dia mahatsapa fanatsarana torimaso ary tsy fahitan-tory amin'ny antoandro rehefa matory miaraka amin'ny lamba firakotra. Ny valin'ny fandinihana natao tsy tapaka sy voafehy dia nampiseho fa ireo mpandray anjara tamin'ny lamba firakofana nandritra ny efa-bolana dia nitatitra fa tena ...
Nanaiky ny orinasa japoney fa, noho ny fanaintainan'ny areti-mandringana, ny fisondrotan-karama dia “tsy azo tanterahina”
Reuters, Tokyo, 19 Janoary — Tsy niraharaha izany ny vondrona lobby lehibe indrindra any Japan tamin'ny talata, nitaky fampiakarana vola satria niomana amin'ny fifampiraharahana momba ny karama amin'ny lohataona izy, ary niantso ny fisondrotan'entana ho “tsy azo tanterahina” satria ny orinasa dia ny fiantraikan'ny COVID-19 Nilaza ny tompon’andraikitra fa ny pa ...
Nisy lamba famaohana an-dakozia Disneyland niseho teny amin'ny arabe Buena Vista
Tany am-piandohan'ny andro dia nanatanteraka Live Park Walk & Talk tao amin'ny tanànan'i Disneyland Disneyland izahay, ary tao amin'ny faritra misy ny làlan'i Buena Vista ao amin'ny Disney California Adventure Park mihidy ankehitriny, dia nahita kojakojan-dakozia vaovao izahay. Nisy andiana lamba famaohana / lamba famaohana fanasana vilia vaovao niseho tamin'ny Buena Vist ...
Fahadisoana fahandro fahita 36 sy ny fomba famahana azy ireo Click to play or fiatoana GIF Click to play or fiatoana GIF Click to play or fiatoana GIF Click to play or pause GIF Click to play or pause GIF Click to play ...
Manomboka amin'ny fanipazana rano paty ka hatramin'ny fividianana hena hena diso dia ireto misy lesoka momba ny fandrahoan-tsakafo sy fanaovan-mofo izay tokony hialana raha te-hidina amin'ny ambaratonga avo kokoa ao an-dakozia ianao. (Ary koa, ny fomba fanamboarana ireo lesoka ireo amin'ny manaraka!) Ny vilany feno olona dia fomba fahandro ho an'ny loza. Na dia mety halaim-panahy aza ny manangona ...
Ny microfibers lamba amin'ny ankapobeny dia mandoto ny fitaovan'ny Arktika sy ny vaovao momba ny famokarana
Ekipa mpikaroka ny Arctic-A dia nahita porofo fa ny kofehy plastika ultrafine vita amin'ny tady synthetic "amin'ny ankapobeny" dia mandoto ny Ranomasimbe Arktika. Ny santionany 96 amin'ny 97 nangonina nanerana ny faritra polar dia hita fa misy loto. Dr. Peter Rose avy amin'ny Ocean Conservation Smart Group dia nilaza hoe: ̶ ...
Servieta fandroana amerikana: safidin'ny mpanjifa amin'ny taona 2020
7 Janoary 2021, Dublin (Global News) -ResearchAndMarkets.com dia nanampy ny tatitra "Preferansa ho an'ny mpanjifa amin'ny lamba famaohana any Etazonia". Mampiseho ny laharam-pahamehan'ny mpanjifa lamba famaohana amin'ny alàlan'ny media an-tserasera isan-karazany toy ny media sosialy, tranokala famerenana ary forum. Ny mpilalao lehibe ao ...
Lamba famaohana vita pirinty Disney, Tape Beach Bag, Sariitatra lamba famaohana amoron-dranomasina, Pyjamas amin'ny haran-dranomasina, Lamba famaohana vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy, Andinina amoron-dranomasina vita amin'ny Pure Microfiber,